Ọ bụrụ na ị nwere ọhụrụ iOS ngwaọrụ, ma ọ bụ iPad, iPhone, iPod ma ọ bụ Mac, ị ga-akpaghị aka na-a free iCloud nchekwa nke 5GB. Nke a nchekwa ike ga-eji na-echekwa ihe ndị dị ka photos site na ngwaọrụ gị, music, ngwa, fim, akwụkwọ, ozi ịntanetị, wdg Ọ bụrụ na free 5GB agaghị ezuru gị ma ọ bụ gị mkpa nchekwa, mgbe ahụ, Apple nwere atumatu maka gị. Ole na ole dollar, ị nwere ike nweta mmezi iCloud ohere nchekwa ịzọpụta gị data.
Ọ bụrụ na ị na-ama nwere a na ndenye aha maka iCloud nchekwa na ị na-ekpebi kagbuo na ndenye aha, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Part 1. Olee ịkagbu iCloud nchekwa atụmatụ maka iPhone, iPad na iPod
Nyere n'okpuru bụ nzọụkwụ ịkagbu iCloud nchekwa atụmatụ na ọ na-emetụta iPad, iPhone, na iPod ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1: Mepee Ntọala ngwa na n'ụlọ gị gị na ihuenyo na gbadaa na iCloud ntọala.
Nzọụkwụ 2: Na iCloud ntọala, enweta "Nchekwa".
Nzọụkwụ 3: Na Nchekwa menu, enweta "Jikwaa Nchekwa".
Nzọụkwụ 4: Pịgharịa na ala na enweta "Change Nchekwa Plan".
Nzọụkwụ 5: Kpatụ "Free" nhọrọ na mgbe ahụ enweta Buy na n'elu aka nri nke ngwa.
Tinye Apple ID paswọọdụ iji ọma kagbuo atụmatụ. Nke a ga--mmetụta ozugbo nke ugbu a na ndenye aha expires.
Part 2. Olee ịkagbu iCloud nchekwa atụmatụ na Mac
Nzọụkwụ 1: Pịa na Apple menu na-aga System mmasị, wee pịa na iCloud
Nzọụkwụ 2: Pịa Jikwaa na ala nri akuku.
Nzọụkwụ 3: Pịa ịgbanwe Nchekwa Plan na elu nri akuku.
Nzọụkwụ 4: Pịa na "Downgrade Nhọrọ ..." na-abanye na gị Apple ID paswọọdụ na pịa jikwaa.
Nzọụkwụ 5: Họrọ "Free" atụmatụ ọma kagbuo atụmatụ. Nke a ga--mmetụta ozugbo nke ugbu a na ndenye aha expires.
Nzọụkwụ 6: Pịa Emela ya.
Part 3. Olee ihichapu / nso iCloud akaụntụ
Eji ihe iOS ngwaọrụ enweghị ihe iCloud akaụntụ bụ na-esote agaghị ekwe omume. Ọ dị mma ka ị na-adịghị na otu iOS ngwaọrụ karịa ka nwere otu onye na-adịghị efe ihe iCloud akaụntụ. The iCloud akaụntụ dị mkpa ebe ọ bụ a n'ọnụ ndabere maka onwe gị data. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eme adịghị ndabere gị photos, vidiyo ma ọ bụ music, ị nwere ike ndabere kọntaktị gị, ihe ncheta, kalenda, ozi ịntanetị na ndetu. Ichekwa ha elu bụ mkpa ebe ị nwere ike ịnweta ha ọbụna ma ọ bụrụ na ị hapụ ngwaọrụ gị na ha na-a obere pasent nke gị iCloud nchekwa. Ị pụrụ nanị nweta ma ọ bụ weghachite kọntaktị gị, ozi ịntanetị na onwe onye ndị ọzọ data site nnọọ syncing ọhụrụ ngwaọrụ a na iCloud akaụntụ ma ọ bụ site-egbu osisi na iCloud ma na Windows ma ọ bụ Mac.
Ọ bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ mere ị na-adịkwaghị chọrọ iji iCloud nchekwa ị nwere ike ihichapu gị iCloud akaụntụ. Niile i nwere ime bụ ka ihichapụ akaụntụ site na ngwaọrụ gị niile na ikpochapụ data echekwara na iCloud akaụntụ.
Ihe ị chọrọ ime tupu emechi gị iCloud akaụntụ
Ebe ọ bụ na i kpebiri na-emechi gị iCloud akaụntụ, nke mbụ niile ị chọrọ iji jide n'aka na ọ dịghị nke ngwaọrụ gị na-ugbu a na-synced gị iCloud akaụntụ. Nke a dị mkpa n'ihi na ọbụna mgbe ị na ihichapụ akaụntụ na ngwaọrụ na-syncing mgbe ahụ, ọ bụ dị ka i mere ihe ọ bụla.
Nke abuo, i kwesịrị hichapụ ihe niile akaụntụ si ngwaọrụ gị niile. Ma ị na-eji ihe iPhone, iPad ma ọ bụ a Mac, i kwesịrị ka ihichapụ iCloud akaụntụ site na ndị a niile ngwaọrụ.
Mgbe ihichapụ akaụntụ gị n'aka gị na ngwaọrụ, ị ga-mkpa abanye na iCloud.com na kọmputa gị ma hichapụ na-esonụ:
Photos: Ọ bụrụ na ị na-ekwe na ngwaọrụ gị bulite gị foto iCloud mgbe ahụ ị maa nwere na-elele akaụntụ iji ihe nchọgharị weebụ gị na ihichapụ niile foto echekwara na iCloud nkesa. Nke a na-ejikarị syncs na ngwaọrụ gị na ebe ọ bụ na i wepụrụ akaụntụ site na ngwaọrụ, ọ ga-aba mmekọrịta.
Videos: Hichapụ niile videos uploaded ka iCloud nkesa site na ngwaọrụ gị si iCloud web ka kpamkpam tufuo ya na ihe nkesa.
Music: Ọtụtụ ndị mmekọrịta ha music na ha iCloud akaụntụ. Ị ga-mkpa ka ihichapụ ha dị ka mma.
All kọntaktị gị: Otu n'ime ndị kasị mkpa mere nke inwe a ekwentị ke akpa bụ ebe kọntaktị. The iCloud echekwa niile kọntaktsị na ngwaọrụ gị na mkpa ka ị ihichapụ ha ebe ọ bụ na ị na-emechi ndị na akaụntụ.
Kalenda: Ị nwekwara mkpa hichapụ gị ndenye kalịnda site na ihe nkesa.
Ndetu: gị na ndetu site na ngwaọrụ gị na-enwe na-ehichapụ na-eme ka usoro a a ịga nke ọma.
Echetara anyị: Ọ bụrụ na ị bụ ụdị nke na-eji ihe ncheta mgbe niile, mgbe ahụ, m iche ị maara na ncheta na-uploaded ka iCloud nkesa.
Mail: Nke a bụkwa otu n'ime ndị dị mkpa mere na ị nwetara na ekwentị na akpa ebe na-ekpocha na mail na iCloud dị ezigbo mkpa ebe ọ dere nza nke onye ozi.
Mgbe erasing ihe niile si gị iCloud akaụntụ, ị ga-agakwaghị enwe ike ịnweta iCloud ndabere nke ngwaọrụ gị ma e wezụga ọ bụrụ na ị kwadoo ha iji iTunes. Nke a pụtara dịghị azụ elu maka ngwaọrụ gị na mgbe ya Nwela Mkpughe ma ọ bụ na-aga na-efu, mgbe ahụ, gị niile data a ga-arahụ.
Ka ihichapụ iCloud akaụntụ
Ihichapụ iCloud si gị na ngwaọrụ bụ nzọụkwụ mbụ na-emechi gị iCloud akaụntụ. Iji mee otú ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Mepee Ntọala ngwa si Home ihuenyo na gbadaa na iCloud ntọala.
Nzọụkwụ 2: Pịgharịa gaa na ala nke iCloud peeji na enweta Hichapụ Akaụntụ.
Nzọụkwụ 3: Kpatụ Nhichapụ nhọrọ ke mmapụta elu window iji gosi iCloud akaụntụ nhichapụ.
> Resource> iCloud> Olee ịkagbu iCloud nchekwa atụmatụ